Tygoshicage Umuthi izizwe 14.08.2021 14.08.2021 Comments
Umbuzo: Yini into enhle kakhulu ongayinika inja ngesisu esithukuthele?
Ngomsebenzi ngifuna ukuba ...
Yini ongayondla izinja ngezinkinga zamathumbu? Yini ongayinika inja ngomuthi ophikisayo wesisu? Uma inja yakho ingakaze iyithathe ngaphambili, hlola ithimba lakho lokunakekelwa kwezempilo ngaphambi kokulinganisa. Imuphi umuthi ongawunika inja ngesisu esibuhlungu nokuhlanza?
Yini ongayinika inja yakho ephosa phezulu? Okuphakelayo Bland Ukudla Uma ukuhlanza kuyeka ngaleso sikhathi, i-vet yakho kungenzeka ukuthi inikeze isilwane sakho ukudla okungafuneki njengenkukhu eshubile nelayisi elimhlophe ngamanani amancane ezinsukwini ezimbalwa kuze kube yilapho siphinda singenisa kancane ukudla kwaso okujwayelekile.
Ziyini izimpawu zenja ephethwe isisu? Ukuhlanza nokuhuda yizimpawu ezijwayelekile zesisu esivuvukile, nesithukuthele, noma ukucasuka kwamathumbu ezinjeni nasemidlwane. Ezinye izimpawu zokuthi inja yakho inesisu esicasukile zingabandakanya, ukukhotha izindebe noma ukukhotha umoya uphawu lwesiyezi , ukugwinya njengendlela yokulwa ne-acid reflux , ukungabi nalo iphango nokudinwa. Kuyathakazelisa: Kwenzekani uma inja ine-melatonin eningi kakhulu? Ngingazigeza ngani izinja zami isisu?
Zama ukunikeza ubhanana wakho oyinjawe noma ubhanana ukudla kosana ngesipuni noma ngomunwe wakho. Myeke akhothe inani elincane ngesikhathi.
Lokhu kuzomsiza ukuthi ahlale ehlanzekile futhi kumnikeze noshukela wamandla. Uma inja yakho kufanele idle futhi ingakwazi ukuzila ukudla, mnike inani elincane lelayisi elibilisiwe amahlandla ambalwa usuku lonke. Ngabe amaqanda aqhekeziwe alungele isisu senja esithukile? Amaqanda awumthombo omuhle wamaprotheni. Futhi aqukethe amafutha abalulekile nama-amino acid. Amaqanda, aphekwe kahle, angasiza nokuxazulula isisu senja esithukuthele, futhi angenza ukwelashwa okuhle okumangazayo.
Imuphi umuthi wokulwa nesicanucanu izinja ongazithatha? Le mithi yokulwa nesicanucanu ingavimbela ukuhlanza esilwaneni esicindezelekile. Yiliphi ikhambi lasekhaya engingalinika inja yami ekuhlanzeni? Nawa amanye amathiphu okwelashwa kwasekhaya: Ngokuhlanza, godla ukudla kepha unganamanzi amahora ayi kuye kwangama, bese kancane kancane uphinde uqalise ukudla kwenja yakho njalo.
Ukuze uhudo, ungagodli ukudla noma amanzi, kepha shintshela ekudleni, ukudla okugaywe kalula izinsuku ezimbalwa.
Ukwelashwa Kwezinja Ezihlanza uma kuwukuhlanza okukodwa, godla ukudla okungenani amahora ayisithupha. Kufanele ngiyise nini inja yami kudokotela wezilwane isisu esithukuthele? Ukuhlanza noma uhudo Uma inja yakho ihlanza kathathu noma ngaphezulu esikhathini esingamahora ayisishiyagalombili, kufanele ukhathazeke. Uma kukhona igazi kunoma yikuphi, kufanele uyise inja yakho kudokotela wezilwane ngokushesha. Kungani isisu senja yami sixubekile futhi singadli?
Imisindo yokuqaqanjelwa ebuhlungu ivame ukuhambisana nobuthakathaka kanye nesifiso esibi sokudla. Ukushintshela okwesikhashana ekudleni kwe-bland kungaba yindlela engcono kakhulu yokusiza ukuxazulula izingqinamba zenja yakho zokugaya ukudla ngokushesha.
Inkukhu ebilisiwe, elula nelayisi kuvame ukubekezelelwa kahle, futhi amanani amancane amathanga asemathinini angasiza ekuxazululeni isifo sohudo.
Njengamanje, ezinye izindlela zokusebenza zivulwa. Abantu abaningi bafundisa izingane zabo ukusebenza ekhaya besebenzisa internet , ikhompyutha noma iselula. Manje sekukhulunywa ngomama be-youtubers noma abeluleki bezondlo, obaba bama-blogger Kunomama abaningi abaqala amabhizinisi abo ukuze bahlanganise amakhaya abo nokunakekela izingane zabo ngomsebenzi..
I amanethiwekhi omphakathi bayimoto yokuthola abalandeli, ababhalisile, nabalingani. Izingane ziyayibona, ziyiphile nsuku zonke futhi ziyayikhanga ezimweni eziningi. Kuyathokozisa ukufaka umsebenzi empilweni ngaphandle kokushiya ikhaya futhi lokho kunamandla, kufinyelela kubantu abaningi futhi kuyakhokhela. Isihloko sekusasa sithanda izingane kakhulu, ikakhulukazi lapho sezivele zikuqonda okwenziwa ngabazali bazo.
Kusukela eminyakeni engu-3 noma engu-4 baqala ukuqonda okushiwo yi- dinero , akunjalo nasemzamweni wokuwina. Yilapho kunemfundiso yabazali. Ezinganeni kunethonya lokubona izinga lokweneliseka kwabazali babo lapho benza umsebenzi wabo kanye nogqozi abalutholayo kubo.
Lapho ubaba ekhuluma kahle nendodana yakhe ngomsebenzi wakhe, echaza ngezimo, umholo wezomnotho noma isheduli futhi emkhuthaza ukuba ayiqeqeshele, ingane iyabandakanyeka. Ngokuphambene nalokho, ingane ebona ubaba noma umama onqikayo, ekhathele ekupheleni kosuku futhi ezimisele ukushintsha, uzizwa enqatshelwe kulowo msebenzi.
Izingane eziningi zize zifise ukuba namabhizinisi azo noma inkampani ukuze kungadingeki zilandele iziqondiso noma imiyalo yabanye.. Imisebenzi efunwa ngabancane Imibono yabo nemicabango yabo izobakhuthaza ukuthi baqeqeshe futhi basebenzise amathuluzi ukufeza inhloso yabo. Izingane namuhla zinezinketho ezahlukahlukene zomsebenzi, zenoveli nezingajwayelekile. Lokhu kufanelana nokufunwa kwezimakethe nezimo zomama nobaba ngamunye.
Noma kunjalo intsha ikhangwa yimisebenzi efunwa kakhulu futhi ivame ukwenqaba ikakhulukazi ukuzinikela kwezepolitiki. Amantombazane ahlala ekhetha njalo ukufundisa noma ubuciko njengamathuba emisebenzi akhangayo. Ukulungisa izinwele nakho kungenye yemisebenzi ebayenga kakhulu.
Ngakolunye uhlangothi, izingane zikhangwa kakhulu yimisebenzi ehilela ukuphepha nokuvikelwa kwesakhamuzi, njengamaphoyisa noma izicishamlilo.. Izingane nazo ziyengwa ngokuzinikela emhlabeni webhola elikhokhelwayo, ngaphezu kwakho konke ngenxa yesimo sempilo ecebile, nethuba lokuhamba Bobabili abesilisa nabesifazane bazizwa bezimisele ukubamba iqhaza emagatsheni ezempilo njengobuhlengikazi noma umuthi. Kwezinye izinkulisa futhi amakolishi kunemisebenzi lapho abazali bemenywa khona ukuthi bazochaza ngemisebenzi yabo.
Izingane eziningi ziyaziqhenya ngokubona umzali wazo ekhombisa amakhono azo futhi ehlaba umxhwele ontanga bawo ngama-anecdotes abo. Kuyiqiniso ukuthi izingane zisencane kakhulu futhi zithola umhlaba, noma kunjalo imibono yabo nemicabango yabo izobakhuthaza ukuthi basebenzise amathuluzi futhi bangayeki umgomo abazibekele wona. Ingane kumele izizwe ikwazi ukwenza konke Umsebenzi wabazali nothisha ukufundisa ku- ukwehluka nokufakwa, ungabandlululi ngokuya ngobulili noma ukhuthaze imibono eyeqisayo.
Abafana namantombazane alesi sikhathi kumele babe nokusekelwa konke lapho bethatha isinqumo sokwenza okuthile noma ukufeza izinhloso ezithile. Abangaba ngabamele imikhakha ethile yezokukhiqiza akumele bavinjelwe noma badikibaliswe ngamaphupho abo okuqala. Ukuthola okuthile okwanelisa, okushukumisayo, futhi okudala ilukuluku kwanele ukubenza balilwele.
Ukuzizwa umuhle futhi unethezekile kuzokunikeza injabulo ngokuzayo. Izingane kufanele zazi ukuthi kufanele ziqeqeshelwe ukufeza amaphupho nokuthi le nqubo kufanele ihlale ingaguquguquki. Abazali kumele bafundise ngomzamo nokuzithuthukisa. Ukujabula nokuzizwa uvumelekile kuzokuhambisa endleleni ehamba phambili.
Okuqukethwe yi-athikili kunamathela ezimisweni zethu ze izimiso zokuhlelela. Ukubika iphutha chofoza lapha. Ungase ube nesithakazelo.
Manje sekukhulunywa ngomama be-youtubers noma abeluleki bezondlo, obaba bama-blogger Kunomama abaningi abaqala amabhizinisi abo ukuze bahlanganise amakhaya abo nokunakekela izingane zabo ngomsebenzi. I amanethiwekhi omphakathi bayimoto yokuthola abalandeli, ababhalisile, nabalingani.
Izingane ziyayibona, ziyiphile nsuku zonke futhi ziyayikhanga ezimweni eziningi. Kuyathokozisa ukufaka umsebenzi empilweni ngaphandle kokushiya ikhaya futhi lokho kunamandla, kufinyelela kubantu abaningi futhi kuyakhokhela.
Isihloko sekusasa sithanda izingane kakhulu, ikakhulukazi lapho sezivele zikuqonda okwenziwa ngabazali bazo. Kusukela eminyakeni engu-3 noma engu-4 baqala ukuqonda okushiwo yi- dineroakunjalo nasemzamweni wokuwina. Yilapho kunemfundiso yabazali. Ezinganeni kunethonya lokubona izinga lokweneliseka kwabazali babo lapho benza umsebenzi wabo kanye nogqozi abalutholayo kubo.
Lapho ubaba ekhuluma kahle nendodana yakhe ngomsebenzi wakhe, echaza ngezimo, umholo wezomnotho noma isheduli futhi emkhuthaza ukuba ayiqeqeshele, ingane iyabandakanyeka. Ngokuphambene nalokho, ingane ebona ubaba noma umama onqikayo, ekhathele ekupheleni kosuku futhi ezimisele ukushintsha, uzizwa enqatshelwe kulowo msebenzi. Izingane eziningi zize zifise ukuba namabhizinisi azo noma inkampani ukuze kungadingeki zilandele iziqondiso noma imiyalo yabanye. Imisebenzi efunwa ngabancane Imibono yabo nemicabango yabo izobakhuthaza ukuthi baqeqeshe futhi basebenzise amathuluzi ukufeza inhloso yabo.
Izingane namuhla zinezinketho ezahlukahlukene zomsebenzi, zenoveli nezingajwayelekile.
Lokhu kufanelana nokufunwa kwezimakethe nezimo zomama nobaba ngamunye. Noma kunjalo intsha ikhangwa yimisebenzi efunwa kakhulu futhi ivame ukwenqaba ikakhulukazi ukuzinikela kwezepolitiki. Amantombazane ahlala ekhetha njalo ukufundisa noma ubuciko njengamathuba emisebenzi akhangayo. Ukulungisa izinwele nakho kungenye yemisebenzi ebayenga kakhulu. Uma inja yakho ingakaze iyithathe ngaphambili, hlola ithimba lakho lokunakekelwa kwezempilo ngaphambi kokulinganisa.
Imuphi umuthi ongawunika inja ngesisu esibuhlungu nokuhlanza? Yini ongayinika inja yakho ephosa phezulu? Okuphakelayo Bland Ukudla Uma ukuhlanza kuyeka ngaleso sikhathi, i-vet yakho kungenzeka ukuthi inikeze isilwane sakho ukudla okungafuneki njengenkukhu eshubile nelayisi elimhlophe ngamanani amancane ezinsukwini ezimbalwa kuze kube yilapho siphinda singenisa kancane ukudla kwaso okujwayelekile.
Ziyini izimpawu zenja ephethwe isisu? Ukuhlanza nokuhuda yizimpawu ezijwayelekile zesisu esivuvukile, nesithukuthele, noma ukucasuka kwamathumbu ezinjeni nasemidlwane. Ezinye izimpawu zokuthi inja yakho inesisu esicasukile zingabandakanya, ukukhotha izindebe noma ukukhotha umoya uphawu lwesiyeziukugwinya njengendlela yokulwa ne-acid refluxukungabi nalo iphango nokudinwa.
Kuyathakazelisa: Kwenzekani uma inja ine-melatonin eningi kakhulu? Ngingazigeza ngani izinja zami isisu? Zama ukunikeza ubhanana wakho oyinjawe noma ubhanana ukudla kosana ngesipuni noma ngomunwe wakho. Myeke akhothe inani elincane ngesikhathi. Lokhu kuzomsiza ukuthi ahlale ehlanzekile futhi kumnikeze noshukela wamandla.
Uma inja yakho kufanele idle futhi ingakwazi ukuzila ukudla, mnike inani elincane lelayisi elibilisiwe amahlandla ambalwa usuku lonke. Ngabe amaqanda aqhekeziwe alungele isisu senja esithukile? Amaqanda awumthombo omuhle wamaprotheni. Futhi aqukethe amafutha abalulekile nama-amino acid.
thoughts on “Umuthi izizwe”
15.08.2021 at 09:28
22.08.2021 at 01:08
Mull on Umuthi izizwe
Copyright © 2021 Umuthi izizwe. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.